१ हजार ४०० विन्दु मुनि नेप्से, कारोबार रकम भने करीब २ अर्ब
साउन १८, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक ४२ दशमलव ७८ अंकले घटेको छ ।
यस दिन २ दशमलव ९७ प्रतिशत घटेर नेप्से परिसूचक १ हजार ३९६ दशमलव २८ विन्दुमा झरेको हो । यस दिन १ हजार ४४१ दशमलव २६ विन्दुबाट बजार खुला भएको थियो । ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि यस दिन २ दशमलव ७२ प्रतिशत घटेर २९२ दशमलव ७७ विन्दुमा झरेको छ ।
आइतवार १८९ ओटा कम्पनीको २७ हजार ८६० पटकको व्यापारमा रू. १ अर्ब ८४ करोड १२ लाख ४२ हजार बराबरको ४६ लाख ६१ हजार ६०८ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीमध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी परेको छ ।
उक्त कम्पनीको रू. २२ करोड ७५ लाख १७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १३ ले घटेर रू. ५८६ कायम भएको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य २ दशमलव १७ प्रतिशत घटेको हो ।
त्यस्तै सर्वाधिक कारोबार गर्ने दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. १४ करोड ५६ लाख ८२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । आइतवार उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य २ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३२३ कायम भएको छ ।
यस दिन १५ ओटा कम्पनीको मात्र शेयरमूल्य बढेको छ । १५ ओटा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य बढेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर आइतवार प्रतिकित्ता रू. ५९५ कायम भएको छ ।
आइतवारको कारोबारमा १६५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यस दिन सबैभन्दा बढी जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ७२ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ६५ कायम भएको हो ।कारोबारमा आएका १२ ओटै समूहको परिसूचक घटेको छ ।
यस दिन बैंकिङ समूहको ३ दशमलव ३५ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको १ दशमलव ९६ प्रतिशत, होटल समूहको ४ दशमलव ४९ प्रतिशत, विकास बैंकको ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ४९ प्रतिशत, वित्त समूहको २ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ५२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह २ दशमलव ३९ प्रतिशत, अन्य समूह १ दशमलव ५१ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ३ दशमलव २९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत घटेको छ ।
७.५९ अंक बढ्दा नेप्से १ हजार ४०० विन्दु माथि, कारोबार रकम १ अर्बभन्दा बढी[२०७७ सावन, १९]
१४००.५७ विन्दुमा नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम १ अर्ब (२ बजेको अपडेट)[२०७७ सावन, १९]
१.०३ अंकले बढ्यो नेप्से, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७७ सावन, १९]
एक घण्टामा ५.२९ अंक घट्यो नेप्से, ३२ करोडभन्दा बढीको कारोबार (१२ बजेको अपडेट) [२०७७ सावन, १९]
१ हजार ४०० विन्दु मुनि नेप्से, कारोबार रकम भने करीब २ अर्ब [२०७७ सावन, १८]